Dadaallo ku saabsan xal u helidda xurguf-colaadeeddii Kob-dhaxaad oo ka socotay gobolka Bari. – Radio Daljir
Bossaso, June 22- Dadaallo xooggan oo ku aaddan sidii xal buuxa looga gaari lahaa xiisad-colaadeedka u dhaxaysa beelo ehel ah oo wada deggan deegaanno ka mid ah gobolka Bari ayaa ka socda magaalada Bossaso taasoo ay ku hawlan yihiin maamulka iyo duqayda dhaqanku.
Dadaalladaan oo labo dhinac ah sida maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa looga gol-leeyahay sidii afka looga gunti lahaa dhibaatada iyo dilalka sii laba-lixaadsaday ee u dhexeeya ood-wadaagta kala deggan degmooyinka Ufayn iyo Carmo kuwaasi oo in muddo ah is colaadinayey.
Xurgufta labada dhinac ayaa cirka isku-shareertay kaddib markii labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay ay dhaceen weeraro toos ah lala bar-tilmaameedsaday dad ganacsato u badan oo ka xog iyo xaal la’aa xiisad abuurka labada garab, taasoo albaabka u furtay colaad mar kale cusboonaata.
Tallaabooyinka lagu xakamaynayo xurgufaha iyo dilalka dhex-dooda ah ayaa laga bilaabay deegaannada eheladaasi ay iska dugaalsadaan iyo meelo kale oo magaalada Bossaso ay ka mid tahay, waxaana ay dawlddu xir-xirtay qaar badan oo ka mid ah odayaasha labada dhinac si loo soo dhaweeyo wadahadllo nabadeed oo colaadda lagu damiyo.
Dhinaca kale labadii maalmood ee ugu danbaysay waxaa iska soo daba-baxayey baaqyo nabadeed oo lagu dalbanayey daminta xiisaddaasi colaadeed taasoo lagu tilmaamayey in ay tahay wax aan loo baahnayn dib-dhacna ku ah nabadda iyo wadajir bulshada reer Puntland, waxaana baaqyadii ugu cusnaa diray dawladda Puntland, issimada, nabaddoonnada, ururrada rayidka ah ee Puntland iyo sidoo kale indheer-garadka labada dhinac.